आधारभूत कुराहरू सिक्नुहोस् | पेनी: पेन्सिल्भेनियालीहरूलाई स्वास्थ्य कवरेजसित जोड्ने
ब्रोकर / अस्भाइडर: | लग इन गर्नुहोस् 1-844-844-4440
ग्राहक: | लग इन गर्नुहोस् 1-844-844-8040
पेनी - घर पेनी - घर
पेन्सिल्भेनियालीहरूलाई स्वास्थ्य कवरेजसँग जोड्ने
कसरी भर्ना गर्ने
पसल को अवलोकन
ब्रोकर / एससिस्टर लग इन गर्नुहोस्
अमेरिकन रेस्क्यु प्लान पारित गर्दा तपाईँ कुन बचतका लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि तपाईँको एक-बिसौनी।
हालै पारित अमेरिकन रिस्क्यु प्लानमा बजार स्वास्थ्य कवरेजको लागि पेन्सिलभेनियाका मानिसहरूले किनमेल गर्न र पेनीमार्फत भर्ना भइसकेकाहरूको लागि थप बचत गर्ने अद्यावधिकहरू समावेश छन्।
म नयाँ छु पेनी
पेनीमा स्वागत छ ! तपाईंको स्वास्थ्य बिमा खर्चको लागि अमेरिकन रेस्क्यु प्लानको अर्थ के होला? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
म पेनी ग्राहक हुँ
अमेरिकी उद्धार योजनाको अर्थ हाम्रा पेनी ग्राहकहरूका लागि बढी बचत हो। धेरै कुरा सिक्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
हालको पेनि ग्राहक
अमेरिकी उद्धार योजनाले तपाईंलाई कसरी असर गर्नेछ भन्ने जानकारीको खोजी मान्नुहुन्छ? हामीले तपाईंलाई छोप्यौं।
अमेरिकी उद्धार योजनाले म स्वास्थ्य बिमामा कति खर्च गर्ने छु भन्ने कुरामा कसरी असर गर्छ?
अमेरिकी उद्धार योजनाको कारण मेरो प्रीमियम कति समयसम्म कम रहनेछ?
मेरो खातामा अमेरिकी उद्धार योजनामा कहिले परिवर्तन भएको देख्नेछु?
हो, कसैसँग कुरा गरेको भए म ढुक्क महसुस गर्छु जस्तो लाग्छ । मदत गर्नुहुन्छ?
अमेरिकन रेस्क्यु प्लानले पेनीको स्वास्थ्य बिमा प्रीमियम कम गर्छ। यदि तपाईं पहिले स्वास्थ्य कवरेजको लागत कम गर्न अग्रिम प्रिमियम कर क्रेडिट (APTC) जस्ता वित्तीय सहायताको लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो भने, कवरेजको लागत लाई अझ कम गर्न थप वित्तीय सहायताको लागि तपाईं योग्य हुनुहुनेछ। तपाईंको आम्दानी धेरै भएकोले तपाईं पहिले आर्थिक सहयोगको लागि योग्य हुनुभएन भने अब तपाईं योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
नोट: अन्य योग्यता मापदण्ड, जस्तै, affordability मानकहरू पूरा गर्ने काम-आधारित आवरण (ESI) पहुँच, परिवर्तन भएको छैन। यो मापदण्ड पूरा गर्ने ईएसआईको प्रस्ताव भएकाहरु पेनी मार्फत आर्थिक सहयोगका लागि अयोग्य भइरहनेछन् ।
अमेरिकन रिस्क्यु प्लान पास भएको कारण ले कति बचत गर्न योग्य हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन अमेरिकन रिस्क्यु प्लान सेभङ क्याल्कुलेटरमा बचत क्याल्कुलेटर हेर्नुहोस् (pennie.com)
अमेरिकी उद्धार योजना अन्तर्गत घटाइएको प्रीमियम २०२१ र २०२२ को सबैका लागि हो जबसम्म कांग्रेसले विस्तार गर्दैन वा स्थायी बनाउँदैन। पेनी मार्फत तपाईको कभरेज सुरु भएको मितिदेखि नै तपाई यस ऐन अन्तर्गत को लाभको लागि योग्य हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईले पहिले नै नसक्नु भएको भए आजै भर्ना गर्नुहोस !
नोट: पेनीले तपाइँको योग्य अनुदान वर्षको सुरुदेखि नै थपेको छ। बाँकी वर्षको लागि तपाइँको अनुदानमा। जसका कारण डिसेम्बर २०२१ देखि जनवरी २०२२ सम्म अनुदानमा फरक पर्नेछ । यसको मतलब तपाईंले आफ्नो डिसेम्बर २०२१ को प्रीमियमबाट जनवरी २०२२ को प्रिमियममा वृद्धि देख्नुहुनेछ।
पेन्नीले पेन्सिलभेनियाका मानिसहरूले सकेसम्म चाँडै आफूले पाउन सक्ने सबै आर्थिक सहयोग पाउन सकून् भनेर लगनशील भई काम गरिरहेकी छिन्। कृपया तपाईं के गर्न योग्य हुनुहुन्छ ठ्याक्कै हेर्न आगामी केही हप्ता र महिनाहरूमा pennie.com आफ्नो खातामा फेरि जाँच जारी राख्नुहोस्।
कडा, पेनीले तपाईंको खातामा यी परिवर्तनहरू कहिले उपलब्ध हुनेछन् र ती प्राप्त गर्न के-कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हो, यदि कुनै छ भने, तपाईंलाई जानकारी दिनेछ। तपाईं आफ्नो आवेदन सम्पादन वा अद्यावधिक र पुन: पेश भने.
म अझै पनि प्रश्नहरू छन्, बाँकी अक्सर सोधिने प्रश्नहरू कहाँ छन्?
हाम्रो पूरा FAQ डाइरेक्टरीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
स्वास्थ्य बिमाको लागि किनमेल गर्दा यी सबै नयाँ परिवर्तनहरू नभए तापनि असाध्यै गाह्रो हुन सक्छ भनेर हामीलाई थाह छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
अमेरिकन रेस्क्यु प्लानले पेनीको स्वास्थ्य बिमा प्रीमियम कम गर्छ। यदि तपाईं पहिले स्वास्थ्य कवरेजको लागत कम गर्न अग्रिम प्रिमियम कर क्रेडिट (APTC) जस्ता वित्तीय सहायताको लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो भने, कवरेजको लागत लाई अझ कम गर्न थप वित्तीय सहायताको लागि तपाईं योग्य हुनुहुनेछ। तपाईंको आम्दानी धेरै भएकोले तपाईं पहिले आर्थिक सहयोगको लागि योग्य हुनुभएन भने अब तपाईं योग्य हुनुहुनेछ।
नोट: अन्य योग्यता मापदण्ड, जस्तै- affordability standards पूरा गर्ने job-based coverage (ESI) मा पहुँच, परिवर्तन भएको छैन। यो मापदण्ड पूरा गर्ने ईएसआईको प्रस्ताव भएकाहरु पेनी मार्फत आर्थिक सहयोगका लागि अयोग्य रहने छन् ।
नोट: अमेरिकन रेस्क्यु प्लान अन्तर्गत भएका परिवर्तनहरू प्रतिबिम्बित गर्न पेनीको प्रणाली अहिलेसम्म अद्यावधिक गरिएको छैन। पेनीले सकेसम्म चाँडै यी परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिरहेकी छिन्। पेनीमा यी परिवर्तनहरू कहिले कार्यान्वयन हुनेछन् भनी हेर्न pennie.com जाँच जारी राख्नुहोस् ।
नोट: अमेरिकन रेस्क्यु प्लान अन्तर्गत भएका परिवर्तनहरू प्रतिबिम्बित गर्न पेनीको प्रणाली अहिलेसम्म अद्यावधिक गरिएको छैन। पेनीले सकेसम्म चाँडै यी परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिरहेकी छिन्। पेनीमा यी परिवर्तनहरू कहिले कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर हेर्न pennie.com जाँच जारी राख्नुहोस् ।
कडा, पेनीले तपाईंको खातामा यी परिवर्तनहरू कहिले उपलब्ध हुनेछन् र ती प्राप्त गर्न के-कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हो, यदि कुनै छ भने, तपाईंलाई जानकारी दिनेछ।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हाम्रो पूरा FAQ डाइरेक्टरीका लागि ।
नमस्ते, म यहाँ नयाँ छु।
अमेरिकन रिस्क्यु प्लानले स्वास्थ्य बिमाको लागि तपाईंले कति पैसा तिर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कसरी असर गर्छ भन्ने जानकारीको खोजी मान्नुहुन्छ? हामीले तपाईंलाई छोप्यौं।
मैले पहिले आर्थिक सहयोगका लागि योग्य ठानेकी थिइनँ । तर अमेरिकी उद्धार योजना ऐनअन्तर्गत म योग्य हुन सक्छु भन्ने लाग्छ, म कसरी जाँच गर्छु ?
के मैले अमेरिकन रिस्क्यु प्लान एक्ट अन्तर्गत कम प्रीमियम प्राप्त गर्न कुनै खास योजनामा भर्ना हुनुपर्छ?
मैले पहिले आर्थिक सहयोगका लागि योग्य ठानेकी थिइनँ – तर मलाई लाग्छ कि म अमेरिकन रिस्क्यु प्लान एक्ट अन्तर्गत योग्य हुन सक्छु, म कसरी जाँच गर्छु ?
अमेरिकन रेस्क्यु प्लान एक्ट २०२१ अन्तर्गत धेरै पेन्सिल्भेनियालीहरू भर्खरै वित्तीय सहायताको लागि योग्य छन् वा अग्रिम प्रिमियम कर क्रेडिट (APTC) जस्ता वित्तीय सहायताको मात्रामा वृद्धि भएको देख्न सक्छन्।
यी बचतहरूले तपाईंको मासिक प्रीमियम निकै कम गर्न सक्छ। पहिले पेनीमार्फत आर्थिक सहायता लिन अयोग्य हुनुभए पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत गर्न सक्नुहुन्छ । योग्यता निर्धारण गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका पेनी को अनलाइन आवेदन प्रयोग गरेर आवेदन गरेर हो। पेनीले सहयोग र जानकारी प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँछिन्। पृष्ठको माथिको "कवर प्राप्त गर्नुहोस्" बटन मा क्लिक गर्नुहोस् र आज तपाईँको अनुप्रयोग पूरा गर्नुहोस् ।
होइन । तपाईं कुनै पनि योजनामा भर्ना हुन सक्नुहुन्छ र आफूले रोजेको योजनामा योग्य अग्रिम प्रीमियम कर क्रेडिट (APTC) को राशि लागू गर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकन रेस्क्यु प्लानले दोस्रो सबैभन्दा कम लागत भएको चाँदीको कोष्ठक योजना, तपाईंको आय, र तपाईंको उमेरको लागत प्रयोग गरेर कटौतीको मात्रा हिसाब गर्दछ। Please note, तपाईं आफ्नो क्षेत्रमा बेन्चमार्क योजना भन्दा फरक योजना मा भर्ना भने, तपाईं एक फरक प्रिमियम राशि देख्न सक्नुहुन्छ.
नोट : अमेरिकन रेस्क्यु प्लान एक्ट अन्तर्गत भएका परिवर्तनलाई झल्काउन पेनीको सिस्टम अहिलेसम्म अपडेट भएको छैन । पेनीले यी परिवर्तनहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गरिरहेको छ । पेनीमा यी परिवर्तनहरू कहिले कार्यान्वयन हुनेछन् भनी हेर्न pennie.com जाँच जारी राख्नुहोस् ।
अझै थप प्रश् नहरू छन् ?
त्यसका लागि हामीसँग एप्लिकेसन छैन – तर हाम्रो जिवन छ, सास फेर्ने मान्छेहरु तपाईका प्रश्नहरुको जवाफ दिन कालागि तयार छन् !
ग्राहक सेवा कल गर्नुहोस्
पेनीको मैत्रीपूर्ण र अनुभवी ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरु तपाईंको आवेदन वा खाता प्रश्नहरूमा मद्दत गर्न तयार छन्।
एउटा पेनि ब्रोकर फेला पार्नुहोस्
दलालहरू नि:शुल्क मार्गदर्शन र सल्लाह दिन्छन्। तपाईंले कुन योजना बनाउनुपर्छ भनेर दलालले मात्र सिफारिस गर्न सक्छन्।
ए पेनी अस्भाइर खोज्नुहोस्
तपाईं र तपाईंको परिवारले कस्ता विकल्पहरू उपलब्ध छन् भनेर बुझ्न एभण्डरहरूले तपाईंलाई मदत गर्न सक्छन्। नि:शुल्क व्यक्ति वा भर्चुअल बैठक अनुरोधगर्नुहोस् ।
एउटा एसिसिस्ट फेला पार्नुहोस्
हामीलाई तपाईँको प्रश्न पठाउनुहोस्
तल को हाम्रो फारम प्रयोग गरेर हामीलाई एक प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ। यो सुरक्षित प्राप्तिमञ्जूषा होइन त्यसैले कृपया तपाईँको खाता वा SSN समावेश नगर्नुहोस् ।
बिमा एउटा झन हामी तपाईँलाई सही योजना प्राप्त गर्न मद्दत गर्न यहाँ छौं। स्ट्रिङहरू संलग्न गरिएको छैन ।
यस वेबसाइटमा प्रदर्शित ट्रेडमार्क, लोगो, र सेवा चिन्हहरू (सामूहिक रूपमा "ट्रेडमार्क") पेन्सिलभेनिया स्वास्थ्य बीमा विनिमय प्राधिकरणको सम्पत्ति हुन् र कुनै ट्रेडमार्क लाइसेन्स या त व्यक्त वा implied द्वारा प्रदान गरिन्छ। पेन्सिलभेनिया स्वास्थ्य बीमा एक्सचेन्ज प्राधिकरणको पूर्व लिखित अनुमति बिना यस वेबसाइटमा प्रदर्शित कुनै ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न तपाईंलाई कुनै अधिकार छैन। © २०७१ PHIEA All Rights Reserved.
पेन्सिलभेनिया स्वास्थ्य बीमा विनिमय प्राधिकरण (PHIEA)
भेरा इन एस्पानोल